Garoonkii diyaaradaha Jowhar oo aad bahalo galeen moodo ayaa hadda dib boorka looga jafayaa + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Garoonkii diyaaradaha Jowhar oo aad bahalo galeen moodo ayaa hadda dib boorka...
Garoonkii diyaaradaha Jowhar oo aad bahalo galeen moodo ayaa hadda dib boorka looga jafayaa + Sawirro
(Jowhar) 18 Maarso 2019 -Waxyaabaha laga dhaxlay dagaaladii sokeeye waxaa ka mid ah burbur baahsan oo saameeyeen goobo halbowlaha u ahaa shacabka iyo kaabayaashii dhaqaalaha sida dekadda iyo Airabootyada.
Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelada Dhexe ayaa waxaa lagu guuleystay in wejigii koowaad ee dib u dhiska garoonkaasi la soo geba gebeeyo,kadib dadaal uu sameeyey maamulka garoonkaasi.
Maareeyahaha cusub ee garoonka Diyaaradaha magaalada Jowhar Mukhtaar Abuukar Macalin oo u waramayay wakaaladda Wararka SONNA ayaa faah faahin ka bixiyay howlaha dib u dhiska ay ka sameynayaan garoonkaasi.
Mukhtaar Abuukar Macalin wuxuu sheegay in ay ku guuleysteen intii koobneyd oo uu xafiiskaasi joogay dhismaha qeybo badan oo garoonkaasi ka mid ah sida xafiis uu ku shaqeeyo,xarumo martida ay ku nastaan iyo xarumo kale,balse wuxuu sheegay in weli ay jirto baahiyo loo qabo horumarinta iyo dhameystirka dhismaha garoonkaasi diyaaradaha ee Jowhar.
“Intii aan joognay waxaan ku guuleysanay in aan soo geba gebeyno wejigii koowaad ee dib u dhiska garoonkaasi,waxaan hirgelinayay xafiisyo lagu shaqeeyo,meelo lagu nasto,balse waxaa loo baahanyahay xarun loogu talagalay in shirarka lagu qabto,taasina waxaan ka sugeynaa dhameystirka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeele,ayuu yiri maareye Mukhtaar Abuukar Macalin.
Wuxuu uga mahadceliyay ganacsatada magaalada Jowhar oo kalin dhiirogelin ah ka qaatay dib u dhiska garoonkaasi diyaaradaha,isagoona sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan sidii dhameystiri lahaa inta ka dhiman.
Previous articleTurkish Airlines oo bisha soo aaddan joojinaysa duullimaadyo ay Muqdisho ku iman lahayd (Sababta)
Next articleQatar oo Soomaaliya ka taageeraysa hormarinta wax soosaarka Beeraha + Sawirro